Xidigaha Bollywoodka Ee Saaxibada Dhabta Ahaa Iyo Marka Ay Dhacday Inee Is Colaadiyan Oo Ay Is Dagaalan Qeybtii 2aad (+Sawiro) – Filimside.net
Xidigaha Bollywoodka Ee Saaxibada Dhabta Ahaa Iyo Marka Ay Dhacday Inee Is Colaadiyan Oo Ay Is Dagaalan Qeybtii 2aad (+Sawiro)
Bollywoodka waxaa soomaray shaqsiyaad fanka taariikh ku reeben kuwaaso waxyaabo wanaag iyo waxyaabo xumaan ahaba lagu xasuusan doono.
Waxaa jiraan xidigo kamid ah Bollywoodka kuwaso nolosha dhabta ah saaxibo ku ahaayen balse mar ay dhacday inee is dagaalan waliba dagaal afka ah.
Hadaba waxaan idiin heynaa Qaar Kamid Ah Xidigaha Bollywoodka Ee Nolosha Dhabta Saaxibo Ku Aha Misane Xurguf Dhexmartay Qeybta 2aad:
Deepika Padukone Iyo Sonam Kapoor:
Deepika iyo Sonam hal sano gudaheda aye fanka kuso wada biiren waxaana xusid mudan in aflaamtoda ugu horeysay ee Bollywoodka hal maalin tiyaatarada la isla saaro kuwaaso kala ahaa Om Shanti Om iyo Saawiriya waxayna guusha raacday Om Shanti Om oo ay Deepika wadatay.
Kadib waxay noqdeen kuwa had iyo jeer waqti wada qaata saaxibana ah balse sheekada waxay is bedeshay marka Ranbir Kapoor meesha soogalay sababto ah Ranbir marki hore waxaa lagu xaman jiray in uu xiriir la lahaa Sonam kadibna uu Deepika usoo wareegay sida awged Sonam iyo Deepika waxay si wadajir ah oga qeyb galeen showga Koffe With Karan.
Showgan aye hadalo isku dhaafsaden Ranbir madaxiisa ayuuna khilaafkas kudhashtay mudo ayeena kala aamusnayen xidigan balse hader waa saaxiibo aad iyo aad isku jecel weyna heshiyeen maadama ninkii ay isku heysteen labadoodaba katagay.
Shah Rukh Khan Iyo Arjun Rampal:
SRK iyo Arjun Rampal waa shaqsiyaad saaxibo ah sido kalena wada shaqeyn dhexmartay maadamaa ay wada sameeyen aflaamta waaweyn ee kala ah Om Shanti Om iyo Rao.One balse warar xan ah ayaa waxay sheegen in Arjun uu yiri guusha filmka Rao one aniga aya u sabab ah ee SRK sabab uma ah taaso SRK uu ka carooday kana fogaaday Arjun.
Mudadaas kadib lama arag xidigahan oo goobaha caanka ah ku kulmaya ama xabadka is galinayaan inkastoo khilaafkan uu SRK beeniyay mar wax laga weydiyay hadana waqtigan la joogo waa saaxiibo aad isugu fiican.
Sunny Deol iyo Rajkumar Santoshi:
Waa kuwa kamid ah xidigihii ugu caansana Bollywoodka ee saaxibada dhow ahaa balse saaxibtinimadooda waxay soo idlaatay markii labadoodaba ay ku dhawaaqen inee sameyaan hal mashruu kaaso ah nolosha Bhagat Singh kaaso kamid ahaa halyeeydii usoo halgamday xornimada India sido kalena ladagaalen gumeysigii ingiriiska xiligii uu hindiya heystay.
Hadaba Santoshi waxuu magac ahaan ula baxay filmkiisa The Legend of Bhagat Singh halka Sunny filmkiis uu ula baxay 23rd March 1931: Shaheed.
Labadan film ayaa halmaalin tiyaatarada la isla saaray balse ganacsi ahaan dhulka ayee galeen maadama hal fariin wada ahayen kaliya magaca filmka kala duwana sababto ah labada film waxay ka hadlaayen nolosha Bhagat Singh waxaana labadan film la daawaday sanadkii 2002 taarikhda marke ku beegneyd 7 June, Sunny iyo Santoshi labadaba wey diiden in midkooda bedeshto sheekada filmka waana meesha ay colaadoda ka bilaawatay ilaa hadana wa kuwa kala fog.